Kubviswa uye nguva dzekucherechedza | Law & More B.V.
Blog » Kubviswa uye nguva dzekucherechedza
Kubviswa uye nguva dzekucherechedza
Iwe unoda kubvisa chibvumirano here? Izvo hazvingagone kuitika ipapo ipapo. Ehezve, zvakakosha kuti kana paine chibvumirano chakanyorwa uye kana zvibvumirano zvakaitwa nezve nguva yekuzivisa. Dzimwe nguva nguva yekucherechedza yepamutemo inoshanda pachibvumirano, iwe pachako usati waita zvibvumirano zvekongiri nezve izvi. Kuti uone nguva yenguva yekuzivisa, zvakakosha kuti uzive kuti chibvumirano chei uye kuti chakaiswa mukati meiyo chaiyo kana isingagumi nguva yenguva. Izvo zvakakoshawo kuti iwe upe chaiyo ziviso yekumisa. Iyi blog ichatanga kutsanangura kuti ndezvipi nguva zvibvumirano zvinosanganisira. Tevere, musiyano uripo pakati peyakagadziriswa-temu uye zvibvumirano zvakavhurika zvinokurukurwa. Chekupedzisira, isu tinokurukura nzira idzo chibvumirano chinogona kumiswa nadzo.
Zvibvumirano zvenguva isingagumi
Panyaya yezvibvumirano zvenguva refu, mapato anozvipira kuramba achienderera kwenguva yakareba. Iko kuita kwacho kunodzoka kana kuiteedzana. Mienzaniso yezvibvumirano zvenguva refu, semuenzaniso, zvivakwa zvekuhaya uye zvebasa. Zvakare, zvibvumirano zvenguva refu zvibvumirano zvinoda kuti mapato aite kamwe-kamwe, senge, semuenzaniso, chibvumirano chekutenga.
Nguva chaiyo yenguva
Kana chibvumirano chakaitwa mukati menguva yakatarwa, zvakabvumiranwa zvakajeka kuti chibvumirano chichatanga riini uye kuti chinopera riini. Muzviitiko zvakawanda, hazvitarisirwe kuti chibvumirano chinogona kumiswa nguva isati yakwana. Pamwechete, ipapo hazvigoneke kumisa chibvumirano unilaterally, kunze kwekunge paine mukana wekuita kudaro muchibvumirano.
Zvisinei, kana zviitiko zvisingafanooneki zvikaitika, mukana wekumiswa ungamuka. Izvo zvakakosha kuti mamiriro aya haasati afungidzirwa muchibvumirano. Uyezve, izvo zvisingafanoonekwe mamiriro zvinofanirwa kunge zviri zveakakomba zvekuti mumwe wacho haagone kutarisirwa kuchengetedza chibvumirano. Pasi pemamiriro aya chibvumirano chekuita chinoramba chichiitwa chinogona kumiswawo nekuparadzwa nedare.
Nguva zvibvumirano zvenguva isingazivikanwe yenguva, musimboti, zvinogara zvichipedzwa nekuzivisa.
Kana zviri mutemo, nheyo dzinotevera dzinoshandiswa pakumisa zvibvumirano zvakavhurika:
Kana mutemo nechibvumirano zvikasapa hurongwa hwekumisa, chibvumirano chisingaperi chiri mukumiswa kwenguva isingazivikanwe;
Mune zvimwe zviitiko, zvakadaro, izvo zvinodikanwa zvekunzwisisa uye kusarongeka zvinogona kureva kuti kumiswa kunogoneka chete kana paine chikonzero chakakomba zvakakwana chekumisa;
Mune zvimwe zviitiko, izvo zvinodikanwa zvekunzwisisa uye kusasarura zvinogona kuda kuti imwe nguva yekuzivisa inofanira kucherechedzwa kana kuti chiziviso chinofanirwa kuperekedzwa nechipo chekubhadhara muripo kana kukuvara.
Zvimwe zvibvumirano, senge zvibvumirano zvevashandi uye mareisi, zvine nguva dzekuzivisa. Webhusaiti yedu ine zvakasiyana zvinyorwa pane iyi nyaya.
Iwe unogona kudzima chibvumirano rini uye sei?
Chero uye chibvumirano chingamiswe sei zvinoenderana nemamiriro ekutanga pachibvumirano. Mikana yekumisa inowanzo bvumidzwawo mune akajairwa mamiriro uye mamiriro. Saka zvine hungwaru kutanga watarisa magwaro aya kuti uone mikana iriko yekumisa chibvumirano. Kutaura zviri pamutemo, izvi zvinobva zvanzi kusunungurwa. Kazhinji, kumiswa hakuitwe nemutemo. Iko kuvapo kwemukana wekubviswa uye iwo mamiriro acho zvinodzorwa muchibvumirano.
Ungade kuzvinyoresa netsamba kana e-mail?
Zvibvumirano zvakawanda zvine chinodikanwa chekuti chibvumirano chinogona kungomiswa nekunyora. Kune mamwe marudzi echibvumirano, izvi zvinototaurwa zvakajeka mumutemo, semuenzaniso mune yekutenga kwepfuma. Kusvikira nguva pfupi yadarika zvaive zvisingaite kumisa zvibvumirano zvakadaro neemail. Zvisinei, mutemo wakagadziriswa mune izvi. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, e-mail inoonekwa se 'kunyora'. Naizvozvo, kana chibvumirano chisinga tsanangure kuti chibvumirano chinofanirwa kumiswa netsamba yakanyoreswa, asi chingoreva chirevo chakanyorwa, kutumira e-mail kwakaringana.
Iko kune, zvisinei, zvakaipira kuzvinyoresa ne-e-mail. Kutumira e-mail kunoenderana neinonzi 'risiti dzidziso'. Izvi zvinoreva kuti chirevo chakanyorerwa mumwe munhu chinongoshanda kana chirevo chasvika pamunhu iyeye. Kutumira iyo yega saka hakuna kukwana. Chirevo chisina kusvika kune anovimbisa hachina zvazvinoita. Chero ani zvake anoputsa chibvumirano ne-e-mail anofanirwa kuratidza kuti iyo e-mail yasvika chaiko kune wekuwedzera. Izvi zvinokwanisika chete kana munhu akatumirwa e-mail akapindura iyo e-mail, kana kana kuverenga kana kubvuma kupihwa risiti kwakumbirwa.
Kana iwe uchida kuputsa chibvumirano chakatopedzwa, zvine hungwaru kutanga watarisa kune akajairwa mamiriro uye mamiriro uye chibvumirano kuti uone izvo zvakatemwa nezve kumiswa. Kana chibvumirano ichi chichifanira kumiswa nekunyora, zviri nani kuzviita netsamba yakanyoreswa. Kana iwe ukasarudza kumiswa ne-e-mail, ita shuwa kuti iwe unogona kuratidza kuti uyo anovimbisa akagamuchira e-mail
Iwe unoda here kukanzura chibvumirano? Kana iwe une mibvunzo nezvekumiswa kwezvibvumirano? Ipapo usazeze kutaura nemagweta e Law & More. Isu takagadzirira kuongorora zvibvumirano zvako uye nekukupa rairo chaiyo.
Previous Post Kurambana kwepasi rose
Next Post Kudzingwa panguva yekuedzwa